Etu esi enuba na Twitch na kedu ihe ịchọrọ | Nzukọ mkpanaka
Otu esi enuba na Twitch na ihe ịchọrọ
Ignacio Sala | | Internet, Mmemme
Ọtụtụ ndị mmadụ na -anabata ịrara onwe ha nye n'ihe masịrị ha na / ma ọ bụ nwee oke mmasị, na -ekerịta ọrụ ha na ndị ọzọ. Ọ bụrụ egwu, egwuregwu vidiyo, eserese, ịkpụ ihe ... ọ ga -ekwe omume ibi ndụ site n'ụlọ site n'ikesa ọdịnaya gị na ịntanetị, ebe Twitch bụ ikpo okwu kachasị ewu ewu ma jiri mee ihe na nke a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ka esi agbasa ozi na Twitch na ihe ịchọrọ ime nzọụkwụ mbụ gị dị ka onye na -ebugharị mmiri, n'isiokwu a anyị ga -ewepụ obi abụọ gị, opekata mpe n'ime ajụjụ ndị dị mkpa iji pịa bọtịnụ Mgbasa ozi wee dịrị ndụ n'ihu ọtụtụ ijeri. nke ndị na -ekiri ya.
Ọnụ ọgụgụ nke ihe anyị ga -eburu n'uche mgbe anyị na -ebugharị na Twitch nwere ike buru ibu, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa maka kọmpụta (anyị nwekwara ike ibunye site na ekwentị ma ọ bụ mbadamba), kamakwa, anyị chọkwara usoro peripherals na ngwanrọ nke ahụ na -enye anyị ohere izipu akara ngosi anyị na Twitch.
Echegbula, enwela obi nkoropụ, n'isiokwu a anyị ga -egosi gị ihe niile ị chọrọyana nhọrọ sọftụwia na ngwaike kachasị mma dị n'ahịa.
1 Gịnị bụ Twitch
1.1 Amachibidoro egwuregwu vidiyo na Twitch
2 Ihe ndị bụ isi chọrọ iji gbasaa na Twitch
2.1 Broadband internet internet
2.2 Ngwa iji nyefee: ama, mbadamba ma ọ bụ akụrụngwa kọmputa (Windows, macOS ma ọ bụ Linux)
3 Kedu ihe ọzọ m kwesịrị ịkwanye na Twitch
3.1 Igwe okwu na ekweisi
3.3 Ihe nkiri vidiyo
4 Ndụmọdụ iji tụlee
Gịnị bụ Twitch
tuwichi mụrụ na 2011 dị ka Justin.tv dị ka ikpo okwu maka mgbasa ozi ndụ ka ya na YouTube nwee asọmpi. Na mbu ọ gbadoro anya na egwuregwu vidiyo, n'agbanyeghị na ka oge na -aga, ụdị nhọrọ dịnụ amụbaala ma taa anyị nwere ọwa na ụdị nnyefe dị ukwuu.
Na February 2014, aha Justin.tv ka akpọrọ Twitch Interactive. N'oge na -adịghị anya, ikpo okwu Amazon nwetara ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri $ 1.000. Google nwere mmasị inweta ikpo okwu iji jikọta ya na YouTube, agbanyeghị, onyinye Amazon karịrị akarị na ọ bụ ya butere ụzọ.
Twitch na -enye ndị ọrụ mmemme Mmemme, mmemme na -enye ohere ka ndị okike mepụta ọdịnaya kpata ego gị site na ndenye aha ndị ọrụ, onyinye yana mgbasa ozi nke na -achịkwa ikpo okwu ozugbo.
Amachibidoro egwuregwu vidiyo na Twitch
Amazon si nkwanye n'elu ikpo okwu anaghị ekwe ka ịkwanye egwuregwu ọ bụla, dabere na njirisi abụọ:
Ntụle ESRB nke gọọmentị bụ Naanị ndị okenye.
Egwuregwu a na -emebi ntuziaka obodo gbasara okwu site mmekọahụ, ịkpọasị, ịgba ọtọ, mmebi enweghị isi ma ọ bụ oke ime ihe ike.
Ndepụta egwuregwu vidiyo amachibidoro na Twitch
Nwa nwanyị wuru ewu 1, 2 na 3
Ụlọ akwụkwọ Artificial 1 na 2
Ụmụ agbọghọ ndị omekome
HuniePop 1 na 2
Purin na Ohuro
Ndị otu Purino
Igwe okpomọkụ 2
Itucha ma Tinyegharịa
Ndị mmụọ ozi Sakura
Sakura Beach 1 na 2
Ụlọ mkpọrọ Sakura
Nke abụọ Life
Sua Dick m ma ọ bụ nwụọ!
Mwakpo Nwa Mwute Nwaanyị: Inferno Semen Ime Ihe Ike
Kedu ihe dị n'okpuru blanket gị !?
Onye na-agba afa
Ihe eji eme ihe Yandere
A na -anabata ụdị aha ọzọ Naanị ndị okenye nwee a ESRB ọkwa nke ndị okenye ma ọ bụ karịa, gụnyere nsụgharị ndị okenye nke Nnukwu Izu Nchekwa onwe: San Andreas na Fahrenheit: Amụma Indigo.
Ihe ndị bụ isi chọrọ iji gbasaa na Twitch
na isi chọrọ ịgbasa ozi site na Twitch bụ abụọ:
Gaa na ịntanetị, na -eri ọtụtụ bandwidth, dị ka ikpo okwu vidiyo na -enuba. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnye ntakịrị ihe dị mma na mgbasa ozi gị (ndị ọrụ Twitch anabataghị iyi ndị adịghị mma), ị ga -enwerịrị opekata mpe 20 MB.
Ọ bụrụ na ị nwere obere ihe ma chọghị ka ogo ahụ ta ahụhụ, ị ​​nwere ike belata mkpebi nrụpụta na 720 na 30 fps. Iji mkpebi dị ala ga -eme ka ndị ọrụ jụ ya, ị gaghị emezu ebumnuche gị nke ịmepụta obodo n'elu ikpo okwu a.
Ngwa iji nyefee: ama, mbadamba ma ọ bụ akụrụngwa kọmputa (Windows, macOS ma ọ bụ Linux)
Agbanyeghị na Twitch dị ka ikpo okwu iji gbasaa egwuregwu vidiyo dị ndụ, ebe ọ bụ Amazon nwetara ya, ọ dịla ịgbasawanye nhọrọ nhọrọ gị na ugbu a anyị nwere ọtụtụ isiokwu ebe anyị nwere ike ịhụ niche nke ndị ọrụ.
Na mgbakwunye na egwuregwu vidiyo, na Twitch anyị nwekwara ike ịhụ ndị ọrụ na -egwu ma na -enye ihe klaasị chess, ndị na -ahụ maka mmega ahụ na -enyere anyị aka ịdị mma, klaasị esi nri, pọdkastị, egwu, ndị mmadụ na -emepụta na / ma ọ bụ na -ese ihe, IRL (Na Real Live) nke anyị nwere ike ịtụgharị dị ka ọ dị na ndụ n'ezie ebe ndị ọrụ na-arụ ọrụ ha kwa ụbọchị (inyefe ngwugwu, ịrụ ọrụ, isi nri ...) ...
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ibunye ezigbo ndụ gbara gị gburugburu, ebe ọ bụla ịnọ, ị nwere ike jiri smartphone ma ọ bụ mbadamba site na njikọ data nke ngwaọrụ gị ma ọ bụ jikọọ na netwọ Wi-Fi ma ọ bụrụ na inwere ohere.
Agbanyeghị na enwere ọtụtụ ngwa na -enye anyị nhọrọ a, nke kachasị mma bụ ngwa Twitch gọọmentị, nke anyị nwere ike iji ya nweta ọdịnaya niile ị mepụtara kwa ụbọchị n'elu ikpo okwu a.
Twitch - gụgharia Live
Mana ọ bụrụ na ebumnuche anyị bụ igosi ka anyị si ese ihe, ihe anyị na -esi nri, ka anyị si ese ihe, otu anyị si emepụta ma ọ bụ egwu ma ọ bụ ka anyị si enwe mmasị n'egwuregwu kachasị amasị anyị, nhọrọ kacha mma bụ site na kọmputa, ma ọ bụ mkpagharị ma ọ bụ desktọpụ, nke ikpeazụ bụ nhọrọ kacha atụ aro.
Ọ bụrụ na echiche anyị bụ ibunye na kọmpụta, anyị ga -achọ ngwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe niile na -arụ ọrụ dị ka silk, otu n'ime ngwa kachasị mfe dị n'ahịa na nke ahụ bụkwa kpam kpam n'efu, anyị na -ahụ ya na Twitch Studio, ngwa nke ụlọ ọrụ mere maka ebumnuche ndị a.
Tulee Studio, dị maka Windows na macOS, na -enye anyị ahụmịhe nkwanye ugwu kachasị dị ugbu a n'ahịa, yabụ emebere ya maka ndị mbido.
Ọ bụrụ na oge na -aga, ị hụ na ngwa a dara, ị nwere ike ịhọrọ ngwa OBS n'efu (dị maka Windows, macOS na Ubuntu), otu n'ime nke ndị na -asọ asọ na -ejikarị nakwa na ọ bụkwa n'efu kpamkpam.
Nhọrọ ndị ọzọ a na -ejichaghị nke ọma mana ha dịkwa mma Streamlabs OBS (n'efu), XSplit (akwụ ụgwọ), VMix (akwụ ụgwọ) y LightStream (akwụ ụgwọ). Ewezuga XSplit (naanị maka Windows), ngwa ndị a niile dị maka Windows na macOS.
El akụrụngwa achọrọ izipu site na kọmpụta, ọ bụghị ngwa NASA. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbasa ozi site na kamera weebụ ka ị na -ekerịta ihe ọmụma gị, jiri faịlụ akụrụngwa dị n'etiti ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbasa egwuregwu ahụ chọrọ kaadị eserese, ma ọ bụrụ na ọ ga -adị mkpa nke otu dị ike, ebe ọ bụ na mgbakwunye na ịme egwuregwu ka ọ rụọ ọrụ, ị ga -emerịrị mgbasa ozi site na Twitch.
Kedu ihe ọzọ m kwesịrị ịkwanye na Twitch
Na ngalaba nke bu ụzọ, egosiri m gị ihe abụọ dị mkpa ka onye ọ bụla wee bido gbasaa site na Twitch ugbu a. Mana, ọ bụrụ na ịchọrọ inye ya mmetụ aka ọkachamara na ọwa gị wee si otú a nweta ntụkwasị obi nke ndị ọrụ nke ikpo okwu a, ị kwesịrị ịtụle nhọrọ ndị a:
Igwe okwu na ekweisi
Chefuo jiri igwe okwu laptọọpụ gị, ebe ọ bụ na, dị ka kamera weebụ, ha na -ahapụ ọtụtụ ihe ga -amasị ha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka a nụ gị nke ọma na ndị na -eso ụzọ gị anụ gị n'enweghị nsogbu mgbe gị na ha na -emekọrịta ihe, ọ kacha mma iji ekweisi jikọtara na akụrụngwa.
Ịkwesighi imefu nnukwu ego na igwe okwu ọ bụla dị na Amazon, opekata mpe na mbụ, ebe ị nwere ike iji nke ha nyere gị na -enweghị nsogbu ọ bụla. na smartphone gị, ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọzọ nke gụnyere igwe okwu na ekweisi. Nke a ga -egbochi ụda ndị na -ekwu okwu ịbanye na igwe okwu.
Agbanyeghị na ọ dịghị mkpa, ọtụtụ ndị ọrụ nke ikpo okwu a na -enwe mmasị ikiri iyi mgbe ha na -egwu egwu ịhụ mmeghachi omume ha. Ọ bụrụ na ugbu a, ịchọrọ ịnwale ịhụ ka o si arụ ọrụ, ịnwere ike ịnwale kamera weebụ nke laptọọpụ gị (ọ bụ ezie na ịdị mma ya adịghị mma), ma ọ bụ zụta kamera weebụ dị ọnụ ala na Amazon ma ọ bụrụ na i si na kọmpụta desktọpụ ma ọ bụ jiri ekwentị mkpanaaka gị dị ka kamera weebụ.
Akụkụ dị oke mkpa nke anyị ga -eburu n'uche mgbe anyị na -eji kamera weebụ bụ ebe igwefoto dị. Ọ dịghị mkpa na a ga -egosipụta naanị ihu, mana na ezigbo obibia bụ ọkara ogologo.
Akụkụ ọzọ ị ga -eburu n'uche, ọkachasị ma ọ bụrụ na igwefoto adịghị mma bụ ọkụ: ka ọkụ na -enwu ị nwere akụkụ ahụ gị nke na -egosi na kamera weebụ, ogo dị elu ị ga -enye ga -egbochi ndị ọrụ ilekwasị anya n'ihe onyonyo gị nke ọma ịhụ ka ị dị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nkwanye egwuregwu site na console, ịchọrọ ijide vidiyo. Na Amazon anyị nwere ọnụọgụ nhọrọ, agbanyeghị, ndị na -enye anyị nsonaazụ kacha mma bụ nke Elago, n'agbanyeghị na ọ bụ onye nrụpụta kachasị ọnụ.
Ndụmọdụ iji tụlee
Ogo bụ ihe niile. Na nke a Anaghị m ekwu na ị ga -etinye nnukwu ego na kọmpụta iji gbasaa site na Twitch, mana ị ga -akwụrịrị ụgwọ nlekọta pụrụ iche yana nkọwa dị mkpa dị ka ogo vidiyo na vidiyo.
Ọ bụrụ na ị na -ekiri ihe nkiri site na Netflix, ịchọrọ ịnụ ụtọ ogo kachasị mma, na -enweghị mbepụ, na -enweghị pikselụ na ụda dị mma. Otu ihe ahụ na -eme na Twitch. Ọ bụrụ na nnyefe anaghị enye anyị ogo kacha mma ma vidiyo ma ọdịyo, anyị agaghị ejigide ndị ọrụ na -esi na ọwa anyị abịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Mmemme » Otu esi enuba na Twitch na ihe ịchọrọ
Ezigbo ihe nchekwa Minecraft maka Windows 10
Loom: ngwa eji achọ mma ka ịdekọ vidiyo na enyo